विप्लवको भेटवार्ताः वामपन्थी एकता कि सहमति कार्यान्वयनको खोजी? :: अशोक घिमिरे :: Setopati
वामहरुको एकता तत्काल सम्भव नभए पनि गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्न सक्ने उनको बुझाइ छ । विश्लेषक श्रेष्ठ माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र चन्द नेतृत्वको नेकपाबीचको ‘एलायन्स’ सम्भव देख्छन्। ‘चन्द सशस्त्र सङ्घर्षको बाटोमा हुनुहुन्थ्यो, सशस्त्र सङ्घर्ष त्यागेपछि उहाँको बाटो के त अब ? त्यसो भएकाले यी तीन पक्षबीच गठबन्धन हुन सक्छ’, उनले भने, ‘तर पार्टी एकता हुन सक्दैन।’ रासस
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ५, २०७८, ०५:३३:००